Microsoft waxay iibsatay Nuance, oo noqon lahaa "waalidiinta" Siri | Waxaan ka socdaa mac
Microsoft waxay iibsataa Nuance, oo noqon doonta "waalidiinta" Siri
Apple waxay Siri ka sii deysay iPhone 4S iyo shirkadda Nuance oo loogu talagalay farsamada aqoonsiga hadalka ayaa mas'uul ka ahaa bixinta tarjumaadda codka-qoraalka ee loogu talagalay ka shaqeynta, marka waxaan dhihi karnaa inay ahaayeen waalidiinta kaaliyaha Apple.
Hadda Microsoft oo maalmo ka hor shaacisay dhammaadka kaaliyeheeda Cortana ee macruufka iyo aaladaha kale waxay ku heshay shirkadda Nuance $ 19.700 bilyan. Maalgashigan ay sameysay shirkadda Satya Nadella wuxuu xiriir la yeelan karaa horumarinta caawiye kale.
Dhowr sano ka hor waxaa jiray xiriir u dhexeeya Nuance iyo Microsoft kaas oo ka shaqeeyay horumarinta barnaamijka 'Microsoft Cloud' ee loogu talagalay daryeelka caafimaadka. Marka maalgashiga shirkadda Redmond ee hadda la leh Nuance wuxuu umuuqdaa mid si toos ah diirada loogu saaray hagaajinta xog ururinta caafimaadka iyo daruuraha. Ma jirto sabab kale oo muuqata oo arintan la xiriirta mooyee illaa ay dhinac iska dhigaan fikradda ah in la bilaabo kaaliye kale. Jagooyinka maamulayaasha iyo kuwa kale ee Nuance, ugu yaraan xilligan ma jiraan wax isbeddel ah. Shirkadaha ayaa midoobi doona maalmaha soo socda.
Hadda Maalgashigan ay samaysay shirkadda Microsoft wuxuu noqonayaa kii labaad ee ugu weynaa taariikhdeeda kadib iibsiga LinkedIn sanadkii hore ee 2016, oo aan hadda ahayn in la rido gantaallo ka dib warka ku saabsan jabsashada ballaaran ee adeegsadayaasheeda. Warkan wax shaqo ah kuma laha arrinta jabsiga, dabcan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Microsoft waxay iibsataa Nuance, oo noqon doonta "waalidiinta" Siri
MacOS 8 Beta 11.3, iOS, iyo iPadOS 14.5 oo loogu talagalay Soo-saareyaasha
Xogta 500 milyan ee isticmaaleyaasha LinkedIn ayaa la jabsaday